ဆိုးလ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ နာမည်ကျော် ကိုရီးယားမင်းသား ဆောင်ဆန်ဟွန်းသည် ဒရာမာအသစ်တစ်ခု တွင် ပါဝင်လာနိုင်ခြေရှိနေသည်။ ¤င်း၏ အေဂျင်စီ Better Ent ၏ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ''မင်းသားဆောင် ဆန်ဟွန်းသည် tvN ရုပ်သံလိုင်း၏ The Great Show ဒရာမာအသစ်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်းခံထားရပြီး အကောင်းဘက်မှ လေ့ လာသုံးသပ်နေကြောင်း'' ပြောကြားခဲ့သည်။ ...
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 20 Feb, 2019
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်အတွက် သရုပ်ဆောင်ရတာ ခက်ခဲပြီး မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ ကာရိုက်တာ တွေကို သရုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်သက်မွန်မြင့်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း . . . မေး- လတ်တလောလုပ်ဖြစ်တဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေ ပြောပြပေးပါဦး။ ဖြေ- အခုလတ်တလောကတော့ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ရှေ့လမှာတော့ ဇာတ်ကားတွေရိုက်ဖို့ ပြန်စမှာဖြစ် ပါတယ်။ ...
IN: Entertainment BY: KZYH 20 Feb, 2019
IN: Sport BY: KKW 20 Feb, 2019
IN: Regional BY: CMW 20 Feb, 2019
ပြည်ခိုင်ဖြိုး တင်သွင်းသည့် ဝန်ကြီးချုပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်က ခန့်ထားနိုင်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းကို လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးရန် အတည်ပြု
IN: Political BY: HWA,MP 20 Feb, 2019
IN: Political BY: TTMT 20 Feb, 2019
ကန့်ကွက်မှုများ ရှိသော်လည်း အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် မဲခွဲအတည်ပြု
IN: Political BY: HWA, MP 20 Feb, 2019
အရေးပေါ်အခြေအနေကို အတည်မပြုကြောင်း လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်လျှင် သမ္မတထရန့် ဗီတိုဖြင့် ပယ်ချဖွယ်ရှိ
ပါတီကြီးများ၏ လိုဂိုသုံးကာ စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ခြင်းကြောင့် မမျှတမှုဖြစ်ပေါ်မည်ကို စိုးရိမ်ဟုဆို
လွှတ်တော် အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲများကို တိုင်းအစိုးရ ကန့်သတ်ခြင်းသည် ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုရာရောက်ဟုဆို
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအပါအဝင် အချက်သုးံချက်ကို မုံရွာမြို့ခံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ လူ ၃ဝဝဝ ကျော်ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် လာရောက်အားပေး
မင်းဘူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မကွေး တိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ်အ တွင်းရှိ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရား ပွဲတော်ဝင်းအတွင်း တရားမဝင် အရက်၊ ဘီယာရောင်းချသူကိုဖမ်း ဆီးအရေးယူထားကြောင်း မန်း ရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲတော် အောက် ...
IN: Regional BY: ZZ 20 Feb, 2019
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် ဂျပန်ပြည်သူများ လှူဒါန်းသည့် ကစ္ဆပနဒီ(၃)အမြန်ရေယာဉ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဦးတည်ခုတ်မောင်းလာပြီး ကျောက်ဖြူမြို့သို့ မတ်လအတွင်း ရောက်ဖွယ်ရှိ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် ကော်မတီဝင်နှင့် မြို့နယ်အဆင့် များအတွက် ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်း၂၇၄ ဦး ရွေးချယ်ပြီးစီး ၊ သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ မဲဆွယ်စည်းရုံးပါက အရေးယူမည်ဟုဆို
အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံဘဲ အလုပ်မှထွက်ခွာပါက ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာပိတ်သည်အထိ အရေးယူခံရနိုင်ကြောင်း ထိုင်းရောက် မြန်မာလုပ်သားများကို သတိပေး
ကချင်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် မိုးသီးကြွေခြင်းနှင့် လေပြင်းတိုက်ခြင်းများကြောင့် အိမ်ခြေ ရှစ်ရာကျော်ပျက်စီး
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာတို့ မဖြစ်မနေသုံးရမည့် အသုံးစရိတ်အတွက် ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေကျပ် ၄၄ ဘီလီယံကျော် ရန်ကုန်တိုင်း လွှတ်တော်သို့ တောင်းခံ
IN: Business BY: TTMT 20 Feb, 2019
စည်ပင်ဈေးများကို ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဆင့်မြှင့်မည်
ထိုင်း ဆန်၊ စပါး အာမခံစနစ်အောင်မြင်၍ ဆက်လက် ကျင့်သုံးမည်
လာမည့်ငါးမဖမ်းရရာသီအတွင်း ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလှေများအပြင် ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များခွင့်ပြုထားသည့် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလှေများကိုပါ ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပိတ်ပင်ရန် တောင်းဆိုသွားမည်ဟုဆို
ပြည်တွင်းပဲဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့် တောင်သူများနစ်နာမှုမရှိစေရေး မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းကုန်သည်များအသင်းမှ ဈေးနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ဝယ်ယူရန်စီစဉ်နေ
ကမ်းဝေးငါးဖမ်း၊ ငါးသယ်ရေယာဉ်များအားလုံး မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမည့် ဂြိုဟ်တုစနစ်ဖြင့် ရေယာဉ်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်စနစ်တပ်ဆင်နိုင်ရေး လာမည့်လအတွင်း တင်ဒါခေါ်ယူမည်
မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူဂန်ဒိုဂန်က ချန်ပီယံလိဂ်တွင် ရှော်ကေးနှင့်ကစားရမည် ဖြစ်၍ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန် မိမိတို့ အသင်းက ရေပန်းစားနေသော်လည်း ရှော် ကေးထက် မိမိတို...
ဗန်ဒစ်မပါဝင်နိုင်သော်လည်း စိုးရိမ်ရန်မလိုကြောင်း အလစ်ဆန်ပြောဆို၊ မိမိ၏အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဘိုင်ယန်ကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ရှိဟု ကီတာကြုံးဝါး
ပညာရေးဥပဒေကြမ်းကို အမေရိကန်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် သပိတ်မှောက်ဖွယ်ရှိ
IN: World News BY: M Bwe 20 Feb, 2019
အက်ဖ်ဘီအိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခံရ၍ နိုင်ငံတွင်းရာဇဝတ်မှုခင်းများ တိုးပွားလာနိုင်ဟု အက်ဖ်ဘီအိုင်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းက ထုတ်ဖော်ပြောဆို
ကက်ရ်ှမီးယားတွင် စစ်သွေြးွကများနှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲကြောင့် အိန္ဒိယစစ်သားလေးဦးနှင့် အရပ်သားတစ်ဦးသေဆုံး
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ တင်ဆောင်လာသော အမေရိကန် စစ်တပ်လေယာဉ်များ ဗင်နီဇွဲလားနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာ
စပိန်နိုင်ငံ ဘာစီလိုနာမြို့တွင် ကာတလန် ခွဲထွက်ရေးအတွက် လူနှစ်သိန်းကျော် ဆန္ဒပြ
ထရန့်က နယ်စပ်တံတိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးပေါ် အခြေအနေထုတ်ပြန် တိုက်ပွဲသစ်အတွက် မီးမွှေးခြင်းဟု ဝေဖန်ခံရ
'ဒီဇာတ်ကားကနေတစ်ဆင့် ကျွန်မတို့က တံခါးတစ်ပေါက်ကို ဖွင့်ပြီးတော့ ကမ္ဘာကိုလှမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်' ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်
စစ်ကိုင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းမြို့ ဧမြဝတီရပ်အနောက်ပိုင်းဇိနမာရ် အောင်လေ...
IN: Life BY: DW 20 Feb, 2019
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ အ ခြေခံပညာကျောင်းများကို ဘေး ကင်းလုံခြုံပြီး သဘာဝဘေး အန္တ ရာယ်ခံနိုင်စေရန်အတ...
IN: Life BY: AA 20 Feb, 2019
အူလန်ဘာတာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံရှိ KFC စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် စားသုံးပြီးနောက...
IN: Life BY: M Bwe 20 Feb, 2019
အီပို့ရှ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ - မလေးရှားနိုင်ငံ ပီးရက်ပြည်နယ် ကွာလာကူရူမြို့၌ နေအိမ်တစ်ခုတွင် အသက်နှစ်နှစ...
IN: Life BY: YMG 19 Feb, 2019
ဆာနာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ - ယီမင်နိုင်ငံဆာနာမြို့တွင် H1 N1 ခေါ် ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားသောတစ်ဦးကို...
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈- အိန္ဒိယင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် World Health & Wellness Con...
IN: Others BY: WYHW 20 Feb, 2019
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ရန် ချင်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဒေသထွက်ကုန်ပြပွဲ ရန်ကုန်မြို့၌ကျင်းပမည်
IN: Others BY: TTMT 20 Feb, 2019
ကိုယ်ပိုင် အထက်တန်းကျောင်း ပိုင်ရှင်က အသက်မပြည့်သေးသူကို မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်သည့်အမှု အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန် နစ်နာသူ မိသားစုဝင်များတောင်းဆို
သာယာဝတီမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်
၂ဝ၂၁ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မီးမရသေးသော ကျေးရွာများအားလုံး လျှပ်စစ်မီးရမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် ဆို